कश्मिर, भारत र पाकिस्तानकालागि लडाइको मुद्दा किन छ? – Khabar Art Nepal
By Pasang Tamang	 On १३ फाल्गुन २०७५, सोमबार ०३:४०
बीबीसी। विश्वका धेरै सेना तैनाथ भएको स्थानमध्ये कश्मिर पनि एक हो। गत हप्ता पुलवामा जिलमा भारतीय सैनिकमाथि भएको आक्रमणपछि यहाँ अन्य धेरैको ज्यान गइसकेको छ।एकपछि अर्को विस्फोट र सशस्त्र संघर्ष नै यहाँ मृत्युको कारण हो। यो हिंसामा कश्मिरमा अस्थिरताको माहोल बनाएको छ। यो दशकमा यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै मृत्युको आँडका सार्वजनिक भएको छ। २०१८ मा यहाँ ५०० भन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। जसमा आम नागरिक, सुरक्षाकर्मी र आक्रमणकारी सामेल छन्।
अवस्था यति खतरनाक किन छ?
स्वतन्त्रतापछि नै कश्मिर, भारत र पाकिस्तानबीच विवादि विषय बनेको छ। भारत प्रशाशित कश्मिर र पाकिस्तान प्रशासित कश्मिर बाहेक एक भाग चीनको नियन्त्रणमा पनि छ। गत हप एक आत्मघाती आक्रमणमा ४० भारतीय सुरक्षाकर्मीको मृत्युले भारत र पाकिस्तानबीच सुमधुर सम्बन्धको आशामा पानी पोखेको छ।
भारतले उक्त आक्रमणकालागि पाकिस्तानस्थित आतंकवादी समूह जैश–ए–मोहम्मदलाई दोषी ठहर्याएको छ। त्यसपछि पूरै भारतमा पाकिस्तान विरुद्ध विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। आक्रमणपछि भारत प्रशासित कश्मिरमा एक हप्ताकालागि इन्टरनेटमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
पाकिस्तानले उक्त आक्रमणमा आफूहरुको संलग्तालाइ ठाडै अस्वीकार गरेको छ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले कतिसम्म भनेका छन् भने, ‘यस्तो सुन्नमा आएको छ, कि पाकिस्तानसँग बदला लिनुपर्छ, यसकारण आक्रमण गरियोस्। यदि तपाइँले पाकिस्तानमाथि आक्रमण गर्ने सोच्नु भयो भने पाकिस्तानले पनि जावफ दिन्छ।’
भारत र पाकिस्तान दुवै परमाणु सम्पन्न मुलुक हुन्। यदि दुवै देशबीच युद्ध भयो भने यसको परिणाम खराब नै हुनेछ।
कश्मिरलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव मुख्य रुपमा त्यहाँका स्थानीयले भोग्नु परेको छ। स्थानीयले मात्र होइन, देशका विभिन्न भागमा यसको प्रभाव देखिन थालेको छ।
आतंकवादी गतिविधिकालागि उब्जाउ मैदान
दुवै देशबीच १०४७ र १९६५ मा युद्ध भइसकेको छ। कयौं सशस्त्र अभियान, सेना आम नागरिकमाथि कयौं आक्रमण भएका छन्। यही कारण दुवै देशबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदै आएको छ।
परिणाम स्वरुप आज यो क्षेत्रको अर्थव्यवस्था नाजुक स्थितिमा पुगेको छ। भने बेरोजगारी समस्याले ठूलो रुपमा लिएको छ। राजनीतिक अस्थीतार पनि धेरै छ। बेलायती सांसद तथा कश्मिरलाई नजिकबाट नियाल्ने लार्ड नजीर अहमदका अनुसार कश्मिर आतंकवादी गतिविधिकालागि उब्जाउ भूमि बनेको छ।
आर्ड अहमद जस विशेषज्ञका अनुसार कश्मिरको संघर्षलाई बेवास्ता गर्यो भने अफगानिस्तान आसपासका इलामा इस्लामिक स्टेट र तालिबान जस्ता समूहलाई रोक्न मुश्किल हुनेछ।
१९४७ मा देश विभाजनका बेला कश्मिर कसलाई दिने भन्ने विषयमा धेरै मनथन भएको थियो। कश्मिरका महाराज दुवै मुलुकमध्ये बाट एक मुलुकलाई चुन्न मुश्किलको सामना गरिरहेका थिए। उनले अन्तिममा भारतलाई नै चुने र, यो निर्णयपछि विश्वमा नयाँ बनेका यी दुई मुलुकबीच दुई वर्षसम्म युद्ध भयो।
युद्धविराम गर्ने सहमतिपछि पाकिस्तानले आफ्ना सैनिकलाई फिर्ता बोलाउन अस्वीकार गर्यो र कश्मिर दुई भागमा विभाजित बन्यो।
१९५० को दशकमा जब भारत र पाकिस्तान विषम परिस्थितिमा थिए, तब चीनले पूर्वी कश्मिरमाथि विस्तारै विस्तारै आफ्नो नियन्त्रण कामय गर्न थाल्यो। यो क्षेत्रलाई अक्साई चीन भनिन्छ।
भारत र पाकिस्तानबीच दोस्रो युद्ध १९६५ मा भएको थियो। १९८० र १९९० को दशककोबीचमा भारतीय शासन विरुद्ध विरोध प्रदर्शनको क्रम सुरु भए र यो क्षेत्रमा पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादी समूह बढ्न थाले।
१९९९ मा भारतले पाकिस्तान समर्थित सैन्य शक्ति विरुद्ध युद्ध गर्यो। त्यो बेलासम्म दुवै देशले आफूलाई परमाणु शक्ति सम्पन्न मुलुक घोषणा गरेका थिए। जहिलेदेखि यहाँ सिंहा सुरु भयो त्यतिबेलादेखि यहाँ हजारौं मानिस मारिइसकेका छन्।
कश्मिरमाथि जनमत संग्रह
१९५० को दशकमा संयुक्त राष्ट्रसंघले यो क्षेत्रका मतदाताको विचार थाहा पाउनकालागि कश्मिरमा जनमत संग्रह गर्नु उचित हने सुझाव दिएको थियो। भारतले यो विषयको समर्थन गरेको थियो, तर पछि जनमत संग्रह आवश्यकन भएको बतायो । किनभने भारत प्रशासित कश्मिकमा हुने चुनाव भारतमा यसको विलयको समर्थन गर्छ।
तर पाकिस्तान यसमा सहमति भएन। उसले कश्मिरमा धेरै मानिस भारतको शासन नहोस भन्ने चाहन्छन् भन्ने तर्क अघि सारेको थियो। यदि स्वतन्त्र हुने हो भने उनीहरु पाकिस्तानमा विलय हुन चाहन्छन् भन्ने पाकिस्तानले तर्क गरेको थियो। भारत प्रशासित कश्मिरमा मुलसलमानको जनसंख्या ६० प्रतिशत भन्दा धेरै छ। यो भारतको एकमात्र यस्तो राज्य हो जहाँ मुसलमानको जनसंख्या धेरै छ।
नेपाल प्रहरीको प्राविधिक समूहका विभिन्न पदमा खुल्यो (सूची सहित)